Kufuphi elunxwemeni, kuthe cwaka, kukho ibalcony kunye nokukhanya okuninzi
Iimitha ezili-100 ukusuka elunxwemeni kwindawo yokungena engama-28, igumbi elinomgangatho ophantsi onamagumbi amabini akwi-45 square metres enebalcony inika umoya omangalisayo weholide. Iisilingi eziphakamileyo, iifestile ezinkulu, isitayile kunye nenxalenye eyenziwe ngesandla yenza umoya opholileyo. Enkosi kwindawo ekumqolo wesibini ukuya eLottumstrasse, ungakonwabela uxolo olupheleleyo apha. Ukuya kuthi ga kubantu abane banokuhlala kwiflethi. Ilinen yokulala, iitawuli, ukucoca kunye nendawo yokupaka ekufutshane ibandakanyiwe kwixabiso.
Iimitha ezili-100 ukusuka elunxwemeni kwindawo yokungena engama-28, igumbi elinomgangatho ophantsi onamagumbi amabini (i-Sonne-Strand-Binz) kwi-45 square metres enebalcony inika umoya omangalisayo weholide. Ilinen yokulala, iitawuli, ukucoca kunye nendawo yokupaka ekufutshane ibandakanyiwe kwixabiso. Isilingi eziphakamileyo, isitayile kunye nefanitshala eyenziwe ngesandla ngokuyinxenye kunye nombono ongathintelwanga wokusingqongileyo okuthe ngqo ngakumzantsi-mpuma kudala umoya opholileyo. Enkosi kwindawo ekumqolo wesibini ukuya eLottumstraße, ungakonwabela ukuzola ngokupheleleyo apha. Ukuya kuthi ga kubantu abane banokulala kamnandi kwigumbi lokuhlala.
Akufanele uzincome, kodwa sisacinga ukuba indlu ibekwe ngokugqibeleleyo. Kukho izizathu ezininzi zoku: Uhamba kuphela i-100 leemitha ukuya elunxwemeni / kwipromenade. Ndiyabulela kwindawo ekumqolo wesibini, kusazolile apha (ngaphandle kwamangabangaba). Ekungeneni kwethu elunxwemeni 28 kukho yangasese, ibha elunxwemeni kunye nemidlalo yamanzi Binz. Ukongeza kwi-globetrotter, ezinye iindawo zokutyela ezininzi zinokufikelelwa ngokukhawuleza. Kuthatha kuphela malunga nemizuzu esixhenxe ukuhamba ukuya kwi-pier kunye ne-Netto / Lidl.
Ubumnandi, ubuhle kunye nomtsalane- yindlela ebesifuna ukuyila indlu yethu yeeholide. Apha akufanele nje ukwazi ukuchitha ubusuku, kodwa kunokonwabela iholide yakho macala onke. Kule nto sidale umoya ohambelanayo kunye nefenitshala yomthi eyenziwe ngesandla, imibala efudumele kunye nokukhanya. Sinethemba elikhulu lokuba uziva ukhululekile kunye nathi kwaye sikunqwenelela iholide emnandi eBinz!
Ubumnandi, ubuhle kunye nomtsalane- yindlela ebesifuna ukuyila indlu yethu yeeholide. Apha akufanele nje ukwazi ukuchitha ubusuku, kodwa kunokonwabela iholide yakho macala onke. Ku…